FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GORDON SETTER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Gordon Setter
Gordon Setter — Sary nahazoana lalana avy tamin'i David Hancock
Lisitry ny Dog Setter Mix Dogs
Ny Gordon Setter dia mahia, fa matanjaka amin'ny firafiny. Ny loha dia lalim-bava. Tokony ho lava ny karandohany, raha misy fijanonana voafaritra. Malalaka ny orona mainty. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny maso boribory mavo volontany. Ny sofina lava dia apetraka ambany, manodidina ny haavon'ny masony, mihantona akaikin'ny loha. Somary mitongilana kely aloha sy aoriana ny topline. Ny rambo fohy dia tsy voafatotra, ary tsy mahatratra ny volombava. Esorina indraindray ny demclaws. Ny palitao malefaka sy mamirapiratra dia somary mikotrana na mahitsy. Ny volo eo amin'ny sofina, eo ambanin'ny vavony, ny tratra, ny lamosin'ny tongotra ary ny rambony dia lava kokoa noho ny amin'ny sisa amin'ny vatana. Ny volom-borona eo ambanin'ny rambony dia manomboka lava kokoa eo am-potony ary mihalava kokoa rehefa mahatratra ny tendrony, manome endrika telozoro. Ny Gordon Setter no hany setter izay tonga mainty misy marika mena. Ny marika tan dia na chestnut manan-karena na mahogany miloko ary miseho amin'ny maso, eo amin'ny sisin'ny vavony, eo amin'ny tenda, teboka roa amin'ny tratra, amin'ny tongotra sy amin'ny vavahady. Mety misy teboka fotsy kely eo amin'ny tratra.
Ny Gordon Setter dia miavaka noho ny tsy fivadihana sy ny fankatoavana. Alika mahalala fomba, malemy paika, be fandavan-tena izy, manao namana mahafinaritra izay tsara amin'ny ankizy. Manan-tsaina sy vonona izany, a mpihaza mahay mahalana izany matetika no manitra. Sahy, falifaly ary be fitiavana, mila an'ity karazany ity fanatanjahan-tena be dia be na mety ho lasa avo lenta izany. Tena mahatoky amin'ny fianakaviana, mety ho lavitra miaraka amin'ny olon-tsy fantatra. Amin'ny ankapobeny dia tsara amin'ny biby hafa fa mety manandrana manjakazaka raha izany tsy ampy amin'ny fitarihan'olombelona . Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina. Tia mandehandeha ity karazany ity, noho izany dia tsara ny manana tokotanin-trano mimanda. Ankizy mety mikitoantoana Mampiofana mialoha fahaiza-mitarika tsara Alohan'ny hametrahana fahazaran-dratsy nefa tsy ho vita dia mora kokoa ny misoroka ny fihetsika ratsy noho ny manamboatra azy ireo. Mazava ho azy fa tsy sarotra ny fampiofanana ireo alika ireo, raha hentitra ny tompony, nefa milamina. Raha tsapan'izy ireo ny malemy paika na mandefitra ny tompony ho mafy hatoka izy ireo. Ity alika ity dia tokony hampidirina amin'ny toe-javatra rehetra (olona, ​​biby ary zavatra) amin'ny maha-alika kely azy mba hamokarana alika mahay mandanjalanja. Gordon Setter izay natolotra ho alika kely saka hifanaraka amin'izy ireo. Raha mitsidika ny olon-tsy fantatra dia manana toe-tsaina miandry sy mahita izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia mifanerasera tsara amin'ny alika hafa sy amin'ny ankizy izy ireo satria tia olona rehetra.
Haavony: Lehilahy 24 - 27 santimetatra (61 - 69 cm) Vehivavy 23 - 26 santimetatra (58 - 66 cm)
Milanja: Lehilahy 55 - 80 pounds (25 - 36 kg) Vehivavy 45 - 70 pounds (20 - 32 kg)
Ny tsipika an-tsaha matetika dia kely kokoa sy maivana kokoa noho ny tsipika fampisehoana (karazana dabilio).
Salama amin'ny ankapobeny, fa ny sasany mora voan'ny tsimok'aretin'ny valahana, aretin'ny maso toy ny atrophy retinal (PRA) ary ny katarakta. Ireto alika ireto dia mora mitsonika ary tokony hanome sakafo kely roa na telo isan'andro isan'andro fa tsy iray lehibe.
Ny Gordon Setter dia tsy soso-kevitra amin'ny fiainana an-trano. Tsy dia mihetsika intsony izy io ao an-trano (raha toa ka mahazo manao hetsika ivelan'ny trano i Gordon Setter dia ho tony rehefa any an-trano) ary manao izay tsara indrindra amin'ny tokotany malalaka misy fefy milamina tsara ahafahany mandositra. Ny fikafika fihazan'izy ireo dia mitaona azy ireo hirenireny, noho izany dia ilaina ny fefy tsara manodidina ny fanananao.
Ny mpikirakira rehetra dia mila maharitra isan'andro, mandeha haingana na ho lasa tsy milamina sy sarotra tantanana izy ireo. Raha eny am-pandehanana dia alao antoka fa ny alika dia miakatra eo anilany na ao aoriany ilay mitazona ny firaka, tsy eo alohany mihitsy, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho ny olombelona. Ho fanampin'izany, hankafy ihany koa izy ireo ny mihazakazaka afaka amin'ny fiarovana ny tokotanin'ny fefy.
Ny fikolokoloana sy ny fikosehana tsy tapaka ny palitao malefaka, fisaka sy salasalany no ilaina mba hitazomana azy amin'ny toe-javatra tena tsara. Zava-dehibe ny manamarina ny burrs sy ny tangles, ary ny fitandremana fanampiny rehefa mandatsaka ny palitao ny alika. Mandrosoa na shampooo maina raha tsy ilaina. Karakarao ny volo amin'ny fanambanin'ny tongotra ary tazomy ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Gordon Setter dia novolavolaina tany Ekosy tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-17. Ity mpiorina mainty sy mainty ity dia nanjary tian'ny Duke Alexander IV an'i Gordon tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-19. Izy ireo dia nampiasaina ho alika vorona, manana fofona miavaka. Ny alika dia nanondro ilay vorona nianjera, naka azy io ary nitondra azy niverina tany amin'ilay mpihaza. Ny Gordon dia nanana tanjaka lehibe ary afaka nihaza tamin'ny toetrandro ratsy na tamin'ny tany na tamin'ny rano, saingy tsy dia haingana loatra raha oharina amin'ireo tondro ary vokatr'izany dia nanomboka tsy nahazo laza intsony satria nifidy karazana hafa ireo mpihaza. Ny Gordon Setter dia iray amin'ireo karazana izay nampiasaina tamin'ny fampandrosoana ny Setter Irlandey . Ny Gordon dia manao alika mpitifitra olona tokana. Ny Gordon Setter dia neken'ny AKC tamin'ny 1884. Ny talenta sasany an'i Gordon Setter dia misy ny fiambenana, mpiambina, fihazana, fanarahan-dia, fanondroana ary famerenana.
Dexter Nova Bright Star ny Gordon Setter ho alika kely amin'ny 15 herinandro
'Ity ny sarin'ny Pride Sunset Pride an'i Gordon Setter (Sunny). Vao 6 herinandro izy tao amin'ny sary (olon-dehibe izy izao). Tsy tsara tarehy fotsiny izy, fa manan-tsaina mahatalanjona koa. Izy dia mifanaraka amin'ny famaritana ny karazany amin'ny T. Mahira-tsaina izy, be fitiavana, fiainana mampifaly an'i Dada, tia mihaza ary be hery. Soa ihany isika fa misy tokotanin-trano mimanda hahafahany mandany ny heriny. Ny vadiko dia nanangana trano sy tranon-kenna lehibe ho azy, saingy nilaza izy fa tokony nividy fandriana ambony ambony ondana toy ny mpanjakavavy izahay satria io no fatoriany izao! Tena voatahy izahay manana azy amin'ny fiainantsika. '
Star Sparkling Colour Bright Star (Rocky) ny Gordon Setter ao anatin'ny 23 volana
alika kely bullador anglisy amidy
Duff the Gordon Setter amin'ny faha-7 taonany
Star Sparkling Colour Bright Star (Rocky) ny Gordon Setter amin'ny 2 ½ taona
Kintana mamirapiratra manjelanjelatra (Rocky) mandritra ny 29 volana, fananan'i Stephanie Mogollon
Dexter Nova Bright Star ny Gordon Setter amin'ny 15 ½ volana
Gordon Setter 5 taona miala sasatra eo am-pandriana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Gordon Setter
Gordon Setter Sary 1
Gordon Setter Sary 2
sarin'alika kely irlandey
asehoy ahy ny sarin'ny alika mastiff
manga heeler corgi Mix alika kely
volo husky alika kely amin'ny manga maso
St Bernard sy mpiandry ondry mifangaro
bulldog anglisy taloha mifangaro pitbull